अष्ट्रेलियाको शिक्षा विश्वस्तरीय मानिनुका ५ कारण - Himalayan Kangaroo
अष्ट्रेलियाको शिक्षा विश्वस्तरीय मानिनुका ५ कारण
Posted by Himalayan Kangaroo | २८ माघ २०७५, सोमबार ०२:२७ |
मेलबर्न । अष्ट्रेलिया बस्नकालागि मात्र होइन शिक्षा समेत राम्रो भएको देशमा गनिन्छ । यस्ता धेरै कारणले नेपाल लगायतका देशबाट अष्ट्रेलिया अध्ययनकालागि आउन चाहने विद्यार्थीको संख्या धेरै छ । विदेशी विद्यार्थीहरुको अष्ट्रेलियाप्रतिको आकर्षणले यहाँ वल्र्ड क्लास एजुकेसन उपलब्ध रहेको मान्न सकिन्छ । अष्ट्रेलियन एजुकेसन सिस्टमले साइन्टिस्ट,डिजाइनर,इन्टरप्रेनर्स,आर्टिस्ट एण्ड हुमानिटेरियन उत्पादन गरिरहेको छ । जसले विश्वमा परिवर्तन ल्याउनुको साथै ओस्कारदेखि नोबल पुरस्कारसम्म जितेका छन् । अष्ट्रेलियाका मात्र नभई अरु देशबाट गएर अध्ययन गरेर अध्धयन गर्दै काम गर्नेहरको संख्या पनि अष्ट्रेलियामा धेरै छ । अष्ट्रेलियाको सरकारी अनलाइन स्टडी इन अष्ट्रेलियाले यहाँको शिक्षा विश्वस्तरीय मानिनुका केही कारणहरु उल्लेख गरेको छ । जुन यसप्रकार छन् :
विश्वव्यापी पहिचान :
अष्ट्रेलियामा अध्ययन गरेपछि यहाँको शैक्षिक योग्यता विश्वभरि नै प्रतिष्ठित र स्वीकार्य हुन्छ । अष्ट्रेलियन क्वालिफिकेसन फ्रेमवर्कले संसारको जुनसुकै देशमा आफ्नो पहिचानकालागि जान पनि विद्यार्थीलाई अनुमति दिन्छ ।
अष्ट्रेलियामा अध्ययन गर्नेका लागि गुणस्तरको सुनिश्चितता रहेको अष्ट्रेलियाको शिक्षा सम्बन्धी सरकारको आधिकारिक वेबसाइटमा समेत उल्लेख छ । त्यसका अनुसार अष्ट्रेलियाले २० वर्षदेखि अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थीलाई उनीहरुले आशा गरेजस्तै उच्चस्तरको गुणस्तर प्रदान गर्न सफल हुँदै आएको छ । गुणस्तर कायम गर्नका लागि विभिन्न तह र कार्यक्रम अनुसार निकाय तथा कानूनहरु सक्रिय रहेका छन् । विदेशी विद्यार्थीका लागि कानूनी प्रारुप एजुकेसन सर्भिस फर ओभरसिज एजुकेसन एक्ट सक्रिय रहेको छ । त्यसैगरी कुनै संस्थाले अफर गरेको कोर्स पूरा गर्न नसकेका वैकल्पिक कोर्स तथा सिफण्डका लागि ट्युसन प्रोटेक्सन सर्भिस रहेको छ । त्यसैगरी अष्ट्रेलियाको उच्च शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तरको सुनिश्चितताका लागि टेर्टरी एजुकेसन क्वालिटी ऐड स्टान्टार्ड एजेन्सी रहेको छ । यसरी गुणस्तर कायम गर्नकालागि यस्ता कानून तथा निकाय संलग्न भएका छन् ।
बढ्दो अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थी
अष्ट्रेलियन सरकारले शिक्षाका उच्च निकाय,राज्यस्तरका शिक्षाका विभाग लगायतसँग समन्वय गरेर गरेको अध्ययनमा अधिकांश विद्यार्थी बसाइ र अनुभवसँग सन्तुष्ट रहेको पाइएको थियो । जस अनुसार अनुसन्धानमा सहभागी भउका ८७ प्रतिशत अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थीहरु समग्र अनुभवमा सन्तुष्ट तथा धेरै सन्तुष्ट रहेको पाइएको छ । ८६ प्रतिशत सहभागी अध्ययन अनुभवमा सन्तुष्ट तथा धेरै सन्तुष्ट रहेका छन् । त्यसैगरी ८८ प्रतिशत सहभागी अष्ट्रेलियाको बसाइमा सन्तुष्ट र धेरै सन्तुष्ट रहेको पाइएको छ । यो सन् २०१२ मा अष्ट्रेलियन सरकारले गरेको सर्वेक्षण अध्ययनको नतिजा हो ।
अष्ट्रेलियामा अध्ययन गर्न चाहनेका लागि सिक्ने वातावरण राम्रो रहेको छ । अष्ट्रेलिया र विदेशी विद्यार्थीसँग तथा आफ्नै देशका विद्यार्थीलाई साथी बनाउने सुनदर अवसर पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ । अष्ट्रेलियाका शैक्षिक संस्थामा संलग्न भएपछि नजिकिएर क्लासमेट्स,रिसर्चर,इन्स्ट्रक्टर,एण्ड अरु फ्याकल्टीसँग नजिकिएसँगै काम गर्न सक्छ । समन्वय विद्यार्थीको सफलताको मूख्य पाटो रहेको छ । टिमवर्क,सेयर गरेर हुने सिकाइ र उद्योग केन्द्रीतको समन्वयले विद्यार्थीको आगामी अध्ययन र करियरलाई राम्रो ढाँचा उपलब्ध गराउँछ ।
अष्ट्रेलिया : एउटा रिसर्च इन्टेन्सिभ देश
विश्वस्तरको रिसर्च र विकासमा अष्ट्रेलियको लामो र गर्व लायक परम्परा रहेको छ,जसका कारण संसारका दशौं लाख लाभन्वित भएका छन् । रिसर्चका लागि मिलियन अष्ट्रेलियन डलर लगानी गर्ने गरेको छ ।
Previousरोनाल्डोको जीवनकै पहिलो घट्ना घट्यो
Nextउपमहानगरको ६३ लाख भोजभतेरमै स्वाह !
अष्ट्रेलियाको कुन समुद्री किनार सबैभन्दा राम्रो ? ट्रिप एड्भाइजरले निकाल्यो यस्तो सूची
१० फाल्गुन २०७४, बिहीबार ०७:३०
यी हुन् अष्ट्रेलियाले दिने भिसाबारे थाहा पाउनुपर्ने ९ कुराहरु
८ माघ २०७३, शनिबार ०२:२६
भारतीय पूर्वमन्त्री लालुप्रसाद यादवलाई १४ वर्ष जेल सँजाय
१० चैत्र २०७४, शनिबार १४:४८
अष्ट्रेलियामा सुरेन्द्र सेढाई ‘बायर्स चोइस बिजनेस एक्सिलेन्स अवार्ड’द्वारा सम्मानित